The history of the little black dress is shown in the Museum of Modern Art's exhibition called Items: Is Fashion Modern? in New York City, Oct. 6, 2017.
ဒီသတင်းပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ဖြစ်တဲ့ Dressing down,To Run out of time နဲ့ Back intoacorner တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Dressing down
Dressing (အဝတ်အစားဝတ်တာ)၊ down က သာမန်အားဖြင့် “အောက်” လို့ ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပမယ့် ဒီနေရာမှာ လျှော့တာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အဝတ်အစားကို လျှော့ဝတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းတော့ ပွဲနေပွဲထိုင် အဝတ်အစားမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ သာမန်နေ့စဉ်အင်္ကျီမျိုးကို ဝတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက စစ်တပ်က ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး၊ စစ်တပ်မှာ စည်းမျဉ်းဖောက်ဖျက်လို့ အရေးယူခံရတဲ့ တပ်သားတဦးအနေနဲ့ အခမ်းအနားနဲ့ တပ်ရှေ့ မှာထုတ်ပြီး ရာထူးတံဆိပ် ဖြုတ်ချခံရတဲ့ အလေ့အကျင့်ကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တပ်မှာတခုခုလုပ်လို့ အဆူခံရတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီအသုံးကို ရည်ညွှန်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Dressing down အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က နှစ်မျိုးရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမက စောစောက ကျမ ရှင်းပြခဲ့သလို စစ်တပ်မှာ အရေးယူခံရမှုကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝမှာတော့ အဆူခံရတာ၊ ရှုတ်ချပြစ်ဒဏ်ခံရတာ၊ အကဲ့ရဲ့ ဝေဖန်ခံရတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Dressing down နောက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ Casual ဆိုတဲ့ သာမန်အဝတ်အစားမျိုး ဝတ်တာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆို Formal အဝတ်အစားဆိုရင် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံအပြည့် ဝတ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Dressing down day လို့ ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ သောကြာနေ့တွေဆိုရင်တော့ အမျိုးသားတွေဆိုရင် ရှပ် အင်္ကျီ၊ ၈ျင်းဘောင်းဘီနဲ့ အလုပ်ကိုလာနိုင်တာကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Dressing down ရဲ့  ပထမပိုင်းရှင်းပြတဲ့ အဆူခံတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးနဲ့ သမ္မတ Donald Trump ရဲ့  ဝေဖန်ဖြစ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် Republican ပါတီမှာ အထင်ကရ အထက်လွှတ်တော်အမတ် John McCain နဲ့ သမ္မတဟောင်း George W. Bush တို့က ပြစ်တင်ဝေဖန်တဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကို လေးရက်တာအတွင်း ရှေ့ ဆင့်နောက်ဆင့် ပြောခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့် CNN သတင်းဌာနကြီးကခေါင်းကြီးမှာ George W. Bush joins John McCain in dressing down Donald Trump လို့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The boss gave Johnagood dressing down for being late for the important meeting.
John က အရေးကြီးတဲ့ အစည်းအဝေးကိုရောက်လာတာ နောက်ကျလို့ ဆရာသမားရဲ့  အဆူအပူကို ကောင်းကောင်းကြီး ခံလိုက်ရတယ်။
(၂) To run out of time
To run out (ကုန်ခါနီးဖြစ်တာ)၊ of time (အချိန်) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အချိန်ကုန်ခါနီးဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း သိပ်မကွာလှပါဘူး။ အချိန်သိပ်မရှိတော့တာ၊ အချိန်သိပ်မကျန်တော့တာ၊ ပေးထားတဲ့အချိန်နဲ့ မလောက်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီအသုံးကို မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong-un အနေနဲ့ နျူကလီးယားလက်နက်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ရာမှာ တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးလက်နက်တွေမှာ နျူကလီးယားထိပ်ဖူး တပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ရရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်လည်း အမေရိကန်အမျိုးသား လုံခြုံရေးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း Herbert McMaster က မြောက်ကိုရီးယားအရေး ကမ္ဘာက ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ အချိန်သိပ်မရှိတော့ဘူးလို့ သတိပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Fox ရုပ်သံလွှင့်ဌာနက World 'running out of time' to deal with Nuclear Kim and North Korea လို့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအီဒီယံအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Mary ran out of time before she could finish answering the last question of her exam.
Mary က စာမေးပွဲမှာနောက်ဆုံးမေးခွန်းကိုဖြေလို့မပြီသေးခင်အချိန်ကုန်သွားခဲ့တယ်။
(၃) Back intoacorner
Back into (တွန်းပို့ခံရတာ)၊ corner (ထောင့်) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ထောင့်ကို တွန်းပို့ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က လူတဦး ပြေးပေါက်မရှိအောင် ထောင့်မှာပိတ်မိနေတာ၊ တနည်းထွက်ပေါက်မရှိဘဲ၊ ပိတ်မိနေတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတဦးအနေနဲ့ ထွက်ပေါက်မရှိ၊ အကျပ်အတည်း တွေ့နေတယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို မြောက်ကိုရီးယား နျူကလီးယားလက်နက် အသုံးပြုမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်အပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂတို့က ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေ ဝိုင်းချမှတ် အရေးယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ရုရှားသမ္မတ Vladimir Putin က ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာမှာ အချေအတင် ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ ဖြေရှင်းပါ။ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကို ထောင့်ပိတ်ခံနေရအောင် မလုပ်ပါနဲ့လို့ ပြောခဲ့ရကနေ NBC သတင်းဌာနက Putin on North Korea crisis: Don't back Kim Jong-un intoacorner လို့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Joe was backed intoacorner. There was no way out so he quit his job.
Joe က ထောင့်ပိတ်မိနေတယ်။ ထွက်ပေါက်မရှိတော့ သူလည်း အလုပ်ကနေ ထွက်လိုက်ရတယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ idioms အသုံးတွေက Dressing down, To run out of time နဲ့ Back intoacorner တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။